Huawei Mate 20 ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကို၎င်း၏ firmware ၏ကျေးဇူးကြောင့်စစ်ထုတ်သည် Androidsis
နေ့ရက်များအားဖြင့်သွားသကဲ့သို့ တရုတ်ကုမ္ပဏီ Huawei ၏နောက်ထပ်အထင်ကရကုမ္ပဏီများနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်အချို့ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်အချို့သည်ကောလာဟလများနှင့်အချို့မှာစစ်ထုတ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော Mate 20 အကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုသိပြီးဖြစ်သည်။
ဒီ high-end ရဲ့ firmware ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နာရီအနည်းငယ်ကမှအဖွဲ့၏အဖွဲ့အစည်းမှထုတ်လွှင့်ခဲ့သည် XDA-Developersဤမိုဘိုင်းဖုန်းများ၏အရည်အသွေးများစွာကိုထုတ်ဖော်ပြသနိုင်ခဲ့သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
ယူဆထားသည့် firmware အရ - ကျွန်ုပ်တို့သည်“ ထင်သည်” ကိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့် - Mate 20 မှာ ၆.၃ လက်မအရွယ် Samsung AMOLED မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ၎င်းသည် firmware တွင်မဖော်ပြထားသော်လည်းအနည်းဆုံး ၁၈: ၉ ပုံစံအောက်ရှိ FullHD + ထက်နိမ့်သော resolution ကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ ၎င်းနှင့်အတူဖိုင်တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောတစ်ခုတည်းသော version သည် 18GB RAM နှင့် 9GB ROM ရှိသည်။
မကြာသေးမီကပေါက်ကြားခဲ့သည့် Huawei Mate 20 Pro
ဒါဟာအစထောက်ပြသည် ဖုန်းနှစ်မျိုးလုံးတွင် HiSilicon Kirin 980 octa-core 7nm ပရိုဆက်ဆာရှိသည်။ ၎င်းသည် Artificial Intelligence နှင့် NPU (Neural Processing Unit) နှင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကြေငြာခဲ့သောလက်ရှိ 970nm Kirin4octa-core (73x Cortex-A2.4 တွင် 4GHz + 53x Cortex-A1.8) ကိုဆက်ခံသူဖြစ်လိမ့်မည်။
အခြားအချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ Mate 20 ကိုပဲပြန်သွားရင် ၄,၂၀၀mAh Battery ပါလာမယ်, ကျနော်တို့မျှော်လင့်ထားသည့်တူညီသောအတွက်ပိုမိုမြင့်မားစွမ်းရည်ဘက်ထရီအားဖြင့်သာလွန်လိမ့်မည် 20 Pro ကိုမိတ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကပိုကြီးတဲ့ screen နဲ့လာလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် စံဗားရှင်းယူဆောင်လာသည့်နောက်ထပ်အင်္ဂါရပ်တစ်ခုမှာကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းအတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်သည်သူကအရည်အသွေးတွေ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ယုတ်ညံ့ပေမယ့်အတော်လေးဆန့်ကျင်ဘက်မဖြစ်သင့်အဖြစ်သူ၏အစ်ကိုကိုလည်းပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်လိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးတော့, ထို firmware ကိုသူတို့ EMUI9အောက်မှာ Android P နှင့်အတူတင်ဆောင်လိမ့်မည်ဟုဖော်ပြသည်နှင့် Mate 20 Pro တွင်ဖန်သားပြင်အောက်ရှိလက်ဗွေဖတ်စက်ရှိသည်။ ထို့အပြင်ဖြစ်နိုင်သော Lite ဗားရှင်းသည်aနှင့်ပါလာနိုင်သည် 710မကြာသေးမီကကြေငြာခဲ့သော SoC သည်အလယ်အလတ်တန်းစားအတွက်ဖြစ်သည် ဆု ပစ္စုပ္ပန် Huawei Nova 3i.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Huawei » Huawei Mate 20 ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကို၎င်း၏ Firmware ကြောင့်စစ်ထုတ်သည်